Akon'ny Isantelovolana Fileovana 10&11 oktobra 2015 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Fandaharana isantelovolana 10&11/10/2015
Akon’ny Isantelovolana Fileovana 10&11 oktobra 2015
Tanteraka soa aman-tsara ny isantelovolan’ny Fileovana Paris, izay misy ny Fitandremana Orléans, misy antsika. Nitarika ny fotoana tamin’izany ny Pastora RASETA, mpitondra ny Fitandremana Orléans, tamin’ny alalan’ny Fotoam-pivavahana litorjika, ny sabotsy.
Nitondra ny tenin’Andriamanitra Teny faneva ny Pastora RAHARIJAONARIVELO, mpitondra Fileovana ny Alahady, andro faharoa. « Ary efa notafianareo ny toetra vaovao » Kol. 3:10a.
Nambarany tamin’izany fa tonga Jesosy, mba ho faty hitondra ny otako. Jesosy nitanjaka mba hampitafy ahy ny voninahitr’Andriamanitra. Tahaka ilay zanaka adala, izay rehefa niverina tamin’dRainy dia nampitafian’izy ity izay tsara indrindra (kiraro, peratra, lamba…).
Manao ahoana ary ny lamba tafiako? Ny toetra vaovao dia Jesosy manamboatra antsika hiditra ny fanjakan’Andriamanitra dieny izao ety an-tany izao.
Manasa antsika handinika ny Romana 13, ampiarahana amin’io Kol. 3:10a teny faneva io, hirosoana indrindra amin’izany toetra vaovao hotafihantsika izany, hoy izy teo am-pamaranana.
Tamin’io fotoana io koa no nandraisan’ny Sekoly Alahady Fileovana anjara tamin’ny hira 772 (Fihirana FFPM) tao aorian’ny toriteny ho an’ny ankizy ary Fampianarana manokana (ny sabotsy).
Isaorantsika Jesosy ny amin’izany satria mahazo ny anjarany koa ny ankizy sy ny Sekoly Alahady. Misaotra ny Komity isan’ambaratongany nanome izany anjara izany.
Ireo solotenantsika Fiangonana FLM Orléans namonjy izany fotoana izany moa dia teo amin’ny 13 teo ho eo, miaraka amin’ny Raiamandreny Pastora RASETA mivady sy ny Katekista RAJOHARISON. Isaorana indrindra tompoko izany fa mariky ny fiombonana sy fifankatiavan’ny mpianakavy ao amin’ny Tompo.
Isika eto amin’ny Fitandremana Orléans indray no mandray ny Isantelovolana manaraka, ny 30-31 janoary 2016.
Ny raharaham-piangonana eo amin’ny Fileovana dia holazaina manaraka eto ihany.
Voninahitra ho an’Andriamanitra irery ihany!